ITHETHA NTONI I-INSTAGRAM HANDLE? (2021) - ITHAMBILE
Inkulungwane yama-21 ininzi malunga neMithombo yeendaba yeNtlalo kunayo nayiphi na enye into emhlabeni. Okungakumbi, amaqonga eendaba ezentlalo kule mihla ane glossary kunye nencwadi yamagama. Kule nqaku, siza kuthetha nge-Instagram Handles.
I-Instagram ngokungathandabuzekiyo lelinye lawona maqonga amajelo asekuhlaleni awaziwayo ngoku. Idlule ngokungummangaliso nakwi-Facebook xa kufikwa kubalo lwabasebenzisi abasebenzayo. Ukusuka kulutsha ukuya kubantu abadala, wonke umntu usebenzisa i-Instagram kwezi ntsuku. Ngoku, njengeqonga leendaba ezentlalo, abantu bafuna into njengokuzazisa. Apha kuza igama ukuphatha imithombo yeendaba.
Imithombo yeendaba yezeNtlalontle yomntu unamandla okophula okanye ukuseka isazisi sakhe eqongeni. Isiphatho sifana negama lomsebenzisi, lilandelwa luphawu @, olunceda abantu ukuba bazenzele ubuqu babo kwiqonga.
I-Instagram Handle yamaphepha oBuntu / abaNtu
Ukuphathwa kwe-Instagram kwiiAkhawunti zeShishini
Zimbalwa iingcebiso zokwenza i-Instagram Handle efanelekileyo
Ukungaguquguquki kweZiphatho zeendaba zeNtlalo
Umqheba we-Instagram ufana nesixhobo sokuchonga esikunika ubukho obukhethekileyo eqongeni . Wonke umntu unesiphatho esahlukileyo se-Instagram, kwaye xa umntu othile ethathe igama lomsebenzisi elithile, awunakusebenzisa. Ufanele ukhethe isiphatho sakho se-Instagram xa usenza iakhawunti. I-Instagram ikunika inqaku lokutshintsha igama lomsebenzisi nanini na ufuna.
Isibambi se-Instagram sinokuchaza izinto ezininzi malunga nomsebenzisi. Ukusuka kwigama ukuya kuhlobo lomxholo othile othunyelweyo, okuninzi kunokuqondwa ngokujonga nje igama lomsebenzisi / isiphatho. Unokufumana nabani na ngokuchanekileyo xa unegama lomsebenzisi. Izisa iprofayili phakathi kweebhiliyoni zeeprofayili ngephanyazo.
Isibambo sakho se-Instagram sisebenza ngokungathi uyinombolo yefowuni eyahlukileyo kuwe . Nabani na kwihlabathi liphela anokukufumana ngokulula usebenzisa isiphatho sakho se-Instagram. Umzekelo, makhe siqwalasele uRobert Downey Jr.
Njengoko ubona kwisikrini esingezantsi, isiphatho sakhe se-Instagram sinje URobert Downey jr , kwaye le yahlukile kuye.
Xa ukhangela le isiphatho esithile Kwi-Instagram, iya kukunika kwangoko iprofayili yakhe ephezulu , Ukuphelisa onke amaphepha fan kunye nezinye iiakhawunti ezingezizo.
Kukwanjalo nakwiphepha leShishini kwi-Instagram. Njengoko imeko yentengiso yemithombo yeendaba kwezentlalo ifikelela kubude obutsha, amashishini amaninzi aya ngakulo endaweni yentengiso yesiko. Amashishini enza amaphepha kumaqonga eendaba ezentlalo ahlukeneyo ukufikelela kubaphulaphuli abaninzi kunye nokufumana abathengi abaninzi.
Ukuba uneshishini kwi-Instagram, kufuneka womelele kumdlalo wokuphatha we-Instagram. Kubalulekile ukugcina isiphatho sakho sikufutshane neshishini ngokusemandleni. Okukhona isiphatho sakho se-Instagram sifana neshishini lakho, impendulo engcono oyifumana kubaphulaphuli ngaphezulu kweqonga. Kuya kufuneka ukhethe igama lomsebenzisi kunye nee-hashtag ngononophelo olukhulu, kuba ezi zimbini ziya kuthatha isigqibo sokuhamba kweshishini lakho kwi-Instagram.
Masiqonde oku ngomzekelo. Masithi uyawathanda amagitare, kwaye ukhangela ikatala kwi-Instagram. Njengoko ubona kwisikrini esingezantsi, ibha yokukhangela izisa ezinye zophando ezinokubakho.
Zonke iiprofayili eziye zavela zineqhosha 'kwigita' kumagama abasebenzisi. Oku kuyenza icace into yokuba onke la maphepha ngandlela thile ahambelana nekatala kwaye ayikho enye into.
umqhubi irql_less_or_not_equal windows windows 10 screen eluhlaza
Masithi unamaphepha amabini phambi kwakho-elinye eliqulethe isigama esingundoqo kwigarari kwisiphatho sayo kwaye elinye lingenalo. Nguwuphi oya kukhetha ngakumbi? Impendulo icacile: uya kuyikhetha enegama eliphambili. La magunya okuba nesiphatho esifanelekileyo se-Instagram.
Ukuba uneakhawunti yeshishini kwi-Instagram okanye ukuba ufuna ukuseta iprofayile yakho ye-Instagram efanelekileyo ngegama lakho, sinezikhokelo ezimbalwa ekufuneka uzilandele:
Namathela kwigama -Ufanele uzame ukugcina isiphatho sakho se-Instagram sikufutshane negama kangangoko. Okukhona ushenxa kwigama, kokukhona iba ayinamsebenzi. Ukuba igama lomsebenzisi olifunayo alifumaneki, ungazama ukusebenzisa amanye amanqaku asezantsi okanye amanani ukufumana le nto uyifunayo.
Sebenzisa ubuncinci beempawu ezizodwa -Siyaqonda ukuba ngamanye amaxesha kuya kufuneka usebenzise oonobumba abakhethekileyo kodwa uzame ukusebenzisa ubuncinci obufunekayo. Uyabona, ukusebenzisa uninzi lwabalinganiswa abakhethekileyo kunokwenza ukuba kube nzima ebantwini ukufumana iakhawunti yakho.
Yigcine imfutshane kwaye ilula -I-Instagram ikunika umlinganiswa oonobumba abangama-30 kwisiphatho sakho. Ngaphezu koko, izibambo ezinde ze-Instagram azibambi bantu ngendlela elungileyo. Amagama abasebenzisi amafutshane nalula kunokwenzeka ukuba afumaneke kwaye ucofe kwiziphumo zokukhangela. Abaphulaphuli bakhetha okufutshane kunye nomxholo wenqaku.
Sebenzisa iijenreyitha zomsebenzisi -Kunokuba kunjalo ukuba awukwazi ukuza nesiphatho esihle. Apha ungasebenzisa igama lomenzi wenkunkuma kwaye ubavumele bakhethe igama lomsebenzisi. Kufuneka ufake kuphela amagama aphambili owafunayo kunye nohlobo lwabaphulaphuli bakho, kwaye umvelisi uya kuza namagama amaninzi onokukhetha kuwo.
Kungenzeka ukuba usebenzise amaqonga amajelo asekuhlaleni. Uyabona, onke amaqonga eendaba ezentlalo afuna igama lomsebenzisi / isiphatho. Kuyinzuzo kakhulu ukuba ube negama lomsebenzisi elifanayo xa uphatha imithombo yeendaba zentlalo. Oku kukunceda ukuba wakhe isazisi esifanayo kwi-intanethi, kwaye kube lula ukukufumana kwi-Intanethi. Ukuba awukwazi ukuba negama lomsebenzisi elifanayo kwiqonga ngalinye kuba kukho umntu olithathileyo, ungasoloko udlala nabalinganiswa abambalwa. Sebenzisa nje isiseko esinye okanye ezibini okanye inani, okoko igama lokwenyani lingadibananga.
Ukuba negama lomsebenzisi elifanayo kuwo onke amaqonga kukunika ukujonga okuthe kratya, kwaye abantu bafumana ukuthembela kubuni bakho. Kodwa ekugqibeleni, kuko konke ukukhetha kwakho. Ungayikhetha into yokubamba ukuba ibe yiyo nantoni na oyifunayo.
Ungayijonga njani iMiyalezo ye-Instagram kwiPC yakho
Uhlaziya kangaphi umhlaba kuGoogle?
Ungazicima njani iiFoto ze-Instagram ezininzi ngaxeshanye
Ngoku sithethile kancinci malunga nokuphathwa kwe-Instagram, kwaye uyazi ukuba kuthetha ntoni, ukubaluleka kwayo, kunye neengcebiso zokukhetha ukuphatha kakuhle. Ixesha layo lokuya kudlala umdlalo wakho wokuphatha we-Instagram ngcono. Ukuba ujongene nawo nawuphi na umcimbi, ungasoloko usifumana kwicandelo lokuphawula.
qala imenyu yempazamo ebalulekileyo windows 10 lungisa
iphepha-mvume lakho lewindows lizakuphelelwa kungekudala
Uqhagamshelo lwasekhaya alunayo idilesi ye-ip esebenzayo
Iscreen sam siba mnyama xa sidlala imidlalo
iifoto zigcina ziphazamiseka windows 10
qala imenyu kunye ne-cortana engasebenzi mpazamo